Kune mudzidzisi, Spanish anthology yekunamata kuna Terry Pratchett | Zvazvino Zvinyorwa
Mumazuva mashoma mushandirapamwe we crowdfunding yenyanzvi yakakosha. Ndezve "Zvemudzidzisi", anthology yenyaya mukuremekedza Terry Pratchett. Mumushandirapamwe uyu vanyori veSpanish vakabatana vanotora chikamu nechinangwa chekupa rukudzo kumusiki weMundodisco.
1 Kune mudzidzisi, charity anthology
2 Vanyori vari kutora chikamu mumushandirapamwe
3 Iri bhuku richaburitswa muzvimiro zvitatu
Kune mudzidzisi, charity anthology
Zvisinei, iyi anthology harisi bhuku renyaya zvichibva pasirese zvakagadzirwa naPratchett, asi zviri mu "Para el Maestro", munyori wega wega anotora chikamu anokudza munyori nemaitiro avo, kugadzira mubatanidzwa wezvinhu zvinotenderedza kuseka, mutambo uye fungidziro, kugona kujoina zvitatu kana chimwe chete nechinangwa choga chekushandisa zvinhu zvinoyeuchidza munyori ari kukudzwa.
Rufu rwemunyori rwakaitika makore mashoma apfuura mushure mekuonekwa kuti ane Posterior Cortical Atrophy, rudzi rwehasha rweAlzheimer's. Neichi chikonzero, uku kupesana ichave ichibatsira zvachose uye zvahuwana zvichaenda kunobatsira kurwisa gomarara, kunyanya kuCita Alzheimer's Foundation.
Vanyori vari kutora chikamu mumushandirapamwe
Iyo nyaya dzinoumba "Para el maestro", pakati pe2000 ne4000 mazwi, Ivo havana kunyatsodhindwa uye rimwe nerimwe rakanyorwa nemumwe munyori wechiSpanish izvo zvinoratidza kuda kwako basa remunyori. Vane gumi nevatanhatu vanyori veSpanish vanoshanda pamwe nenyaya yake:
Ngirozi L. Marin
Gonzalo Zalaya Akanaka
Iri bhuku richaburitswa muzvimiro zvitatu
Iri bhuku richava yakaburitswa nedhijitari fomati, pepa repepa muhomwe uye zvakare icharatidza rakakosha edition hardcover uye esimbi ingi pabutiro.
Mushandirapamwe uyu, ane zuva rekutanga yaive Chishanu chapfuura asi chiri kunonoka inoitirwa kupedza mwedzi uye ichaitwa nechaunga chekubhadhara mari Kickstarter. Chinangwa ndechekuti editions dzive dzinowanikwa mukupera kwaNovember kana kutanga kwaZvita wegore rino, dzakagadzirira Kisimusi.
Kana iwe uchida kutsvaga zvimwe nezve uyu mushandirapamwe pamwe nekufambira mberi kwawo, unogona kuutevera pane twitter muaccount @ForTheMaestroTP
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Noticias » Kune mudzidzisi, Spanish anthology yekuremekedza Terry Pratchett
Verenga Unamuno kuti udzidze kuve baba vakanaka